डिजिटल प्रविधिबाट जग्गा नाप जाँच गर्दा झैझगडा र विवाद कम | suryakhabar.com
वर्तमान सरकार छाड्ने सम्बन्धमा कुनै सोच नै छैनःउपप्रधानमन्त्री यादव
विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिमाथि गृह मन्त्रालयले उच्च निगरानी गर्दै
विप्लव समूह अनधिकृत झुण्ड हो, नभए कही दर्ता भएको छ त? – प्रधानमन्त्री
Home पु.समाचार डिजिटल प्रविधिबाट जग्गा नाप जाँच गर्दा झैझगडा र विवाद कम
on: January 03, 2018 In: पु.समाचारTags: डिजिटल प्रविधिबाट जग्गा नाप जाँच गर्दा झैझगडा र विवाद कमNo Comments
काठमाण्डौ । नापी विभागले नमूनाका रुपमा डिजिटल प्रविधिबाट जग्गा नापजाँचसहित नक्सा वितरण शुरु गरेको छ ।
पहिलो चरणमा पाल्पा जिल्लाबाट यो प्रविधि प्रयोग गरेर जग्गाको नाप नक्सा शुरु गरिएको हो । यो प्रविधिअनुसार जग्गा नाप गरेर प्रत्येक कित्ताको लम्बाइ, चौडाइ, क्षेत्रफल र चार किल्ला खुलेको नक्सा ‘ए फोर’ आकारको कागजमा जग्गाधनीलाई दिइएको छ ।
पाल्पामा यो प्रविधिबाट जग्गा नाप जाँच गर्न विशेष कार्यालय नै खोलिएको छ । कार्यालयमा ९७ कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि हाल ३० जनामात्र कार्यरत रहेको कार्यालय प्रमुख एवं प्रमुख नापी अधिकृत गंगालाल पोखरेलले जानकारी दिए । जनशक्तिको अभावमा काममा ढिलाइ भएको छ ।
“जग्गा नाप्नुपर्ने भएकाले ९७ कर्मचारीमध्ये ६० जना अमिनकै दरबन्दी छ, अमिन पनि डिजिटल प्रविधि जानेका हुनुपर्छ”, उनले भने ।
Tags: डिजिटल प्रविधिबाट जग्गा नाप जाँच गर्दा झैझगडा र विवाद कम
योगेश भट्टराईले कसलाई भने समाचारका दलाल ?
महिला नेतृत्वले पनि विश्व परिवर्तन गर्न सक्छन्: राष्ट्रपति
मुलुक टुक्र्याउन खोज्ने जोकोहीलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउँछौँः महान्याधिवक्ता खरेल